Ukuguqulwa kweNdiza yabaHambi beAirbus yeeFreighters: Imodeli yeNkonzo yokuHamba ngeNqwelo moya
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Ukuguqulwa kweNdiza yabaHambi beAirbus yeeFreighters: Imodeli yeNkonzo yokuHamba ngeNqwelo moya
I-Sine Draco Aviation Development Ltd. ("Sine Draco") namhlanje ibhengeze ukwenziwa komzekelo wenqwelomoya i-A321-200 yenqwelomoya e-Ascent Aviation Services eTucson, Arizona. Inqwelomoya iyakuthi ichongwe njenge-A321-200 SDF kunye nokuvunywa kwesatifikethi sohlobo lwe-FAA.rd ikota 2022.
Umkhweli we-Sine Draco A321-200 SDF oya kuguqulelo lomthwalo wenqwelomoya unikezela isisombululo esifanelekileyo soqoqosho kwisizukulwana esilandelayo sokuhambisa umthwalo.
Uguquko lubandakanya ukufakwa kwe-142-intshi-ububanzi nge-86-intshi-ephezulu kumgangatho wempahla esemgangathweni, iCandelo E ligumbi eliphambili lokuthwala imithwalo elinendawo ezilishumi elinesine kunye nenkqubo yokuphatha imithwalo ye-Ancra. Amagumbi eempahla asezantsi nawo anokuthwala izikhongozeli ezilishumi, kwaye i-A321 iluhlobo lokuqala lwenqwelo-moya kudidi lomthwalo olumxinwa olunamandla."Ukwaziswa komzekelo wohlobo lwe-Sine Draco A321-200 SDF kuguquko linyathelo elibalulekileyo kwinkqubo yethu," utshilo iGosa eliyiNtloko leSine Draco, uAlex Deriugin. “Zonke izinto eziphambili zikwimveliso kwaye zicwangcisiwe, imizobo yobunjineli kunye namaxwebhu ezobuchwephesha akumanqanaba okugqibela okugqitywa, kwaye iinxalenye kunye nezixhobo zifika kwindawo yonyuko yonke imihla. Ukungeniswa kwenqwelomoya kwinqwelomoya kukufikelela kwinqanaba leqela leSine Draco yobunjineli, ukuSebenza kunye namaQela oThengiso lweeNkonzo ngokusebenza nzima ngokubambisana namahlakani ethu kushishino. ”Iinkonzo zokuHamba ngokunyuka ziya kwenza uguquko lwenqwelomoya ngokugqibezela umsebenzi wokuchukumisa, uhlengahlengiso lwesicwangciso kunye neemfuno zovavanyo. Ukutshekishwa okunzima okunzima kugqityiwe kutshanje kwinqwelomoya kwaye kuya kugqitywa ngexesha lolungiso.
Ukunyuka kuya kubonelela ngenkxaso kunye nolondolozo lwenqwelomoya ngexesha lenkqubo kunye novavanyo lwenqwelomoya emva kokuguqulwa.
UDave Querio, uMongameli kunye ne-CEO ye-Ascent Aviation Services uthi, "ukwenziwa kweenqwelo moya iSine Draco A321-200 SDF yenqwelo moya kwisigaba sayo sokuguqula luphawu olucacileyo lomsebenzi onzima owenziweyo mihla le ziingcali kwiSine Draco kunye nokunyuka. Ndilivuyisana neqela lonke le-Sine Draco ngokudibana kwesi siganeko. Sonke silapha e-Ascent siwongekile ukuba yinxalenye yempumelelo yakho kwaye sonwabile ukudlulela kwinqanaba elilandelayo lenkqubo yokulungisa. ”